ဤအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ Otaku ရဲ့နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးဂျပန်ကားဂိမ်းများ
မဂၤဂိမ်းကစားပြီးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောဝက်ဘ်ဆိုက်၊ထိုအင်္ဂါရပ်တစ်ခုတစျခုလုံးကိုအသစ်စုဆောင်းခြင်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအထူးရွေးချယ်ထားသင့်ရဲ့အရသာအတွက်။ သိထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုဒ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါ၊ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်၊မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖန်တီးသာ။ အားလုံး၏အဖြစ်သေားနှင့်ထူးဆန်းလိင်ကနှိုးဆွသင်အနေဖြင့်ဂျပန်၊သို့မဟုတ်ပွန်ယဉ်ကျေးမှုကဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပါသည်၊အားလုံးအပေါ်တစ်ဆိုက်ထားသောဤအတွက်အလွန်ရည်ရွယ်ချက်။ မပိုရှာဖွေနေနှင့်လှန်လှောကြည့်ရှုမဲ့ကိုညာဘက်ကိုရှာတွေ့ဂိမ်း၊အဘယ်သူမျှပိုပြီးအနှောက်အယှက်နှိပ်စာနှင့်တော့။, ဒီအစစ်အမှန်သဘောတူညီနှင့်အတူ၊ဂိမ်းဒီဇိုင်းနှင့်လိုက်ဖြည့်ဆည်းဖို့အသင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊တကြုတ်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးအဖြစ်၊အားလုံးဂိမ်းဒီနေရာမှာအလည်အသီးအသီးအခြား။ ဒီမှာ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အပေါင်းတို့၏အချို့သောအခြေအခတ္အေ၏အကျိုးစီးပွား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဂျပန်လိင်၊အတိအကျဘယ်လောက်၊မရှိနှင့်အတူသွေဖည်။ လည်း၊ငါတို့သည်အချို့သောဂိမ်းများသောအရာပူဇော်သက္ကာကိုကစားသမားတွေကိုပွင့်လင်းကမ္ဘာ၊အခမဲ့နန်းစံနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သင်ကခံစားနိုငျအတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ချင်တယ်။
ဂ်ပန္ညမ်းဂိမ်းစုဆောင်းတတ်၏အားလုံး။ အဘယ်သူမျှမကြိုးကိုင်ပူးတွဲပါအဘယ်သူမျှမနှင့်သောက်သုံး။ သင်ချင်တယ်ကောင်မလေးကမျက်နှာနှင့်အော်သံအတွက်အပျော်အပါးနှင့်အတူမိန်းကလေးကိုေလးစားတဲ့လူ၊သို့မဟုတ်အငယ်အကြောင်းနားလည်သူ boos နှင့်အစွမ်းကုန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အကြောက်အတွက်သူတို့ရဲ့ထူးခြား? သင်ချင်တယ်ကျြဆီးနှင့်လိင်အလွဲသုံးမှုအလွန်ကောင်းမွန်၊အပြစ်မဲ့ရုပ်ရှင်တွေ? သင်အစဉ်အဆက်အိပ်မက်မက်ခြင်း၏ကြီးမားတဲ့နဂါးနှင့်အတူကြီးမားသောကြက်၊သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်မအကွိမျမြားစှာ cocks? ထိုးဖောက်သင့်ချွန်ငုပ်သင်္ဘောနှင့် dildos၊cocks၊tentacles သို့မဟုတ်သင်စဉ်းစားနိုင်သည်ဘာမှမဒီမှာ။, အားလုံးဂိမ်းများဒီစွာတည်ဆောက်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့၊ယုံကြည်သောသူတို့ဖြည့်ဆည်းတူကကျေးဇူးနှင့်ကျွမ်းကျင်။ အဇာတ်ကောင်များအားလုံးကျောင်းသူ-တူ၊ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်၊အလွန်ကြီးစွာသောကြည့်၊ဒါပေမယ့်လည်း crybabies အခါကိုနှိုးဆွနှင့် squirters! စိတ်ပျက်မဟုတ်ခဲ့သည္။ ပင်မှအသစ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်သေား၊စိတ်မပူပါနဲ့၊သငျသညျဖွယ်ရှိနှင့်အလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်လာဖို့ဆွဲဆောင်။ ဒီနေရာမှာသင်ရှိသည်ဖို့အလွတ်လပ်ခွင့်ပြုချင်သမျှကို၊မုဒိမ်းကျင့်၊gangbangs၊အတွေ့အကြုံ tentacle ညမ်း၊အားလုံးအတွက်ပြုနည်းမှန်လမ်းမှန်အောင်၊ခရီးခြွင်းချက်။, ငါတို့သိ၊ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေကြတယ်အမျိုးအားဖြင့်တူညီသောစိတ်ကူးနှင့်သာအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့သိရန်လိုအပ်။
ကျွန်တော်သိသောအတိုင်းအစားကွဲပြားခြားနားသည်ပင်လျှင်စိတ်ကူးယဉ်စက်ဝိုင်းအတူရို။ ဒီအတွက်၊ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးဂိမ်းများမှာသူတို့ရဲ့အနုပညာနဲ့ထည့်သွင်းဖို့သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စုဆောင်းခြင်း၏ညမ်း။ သင်ရှိကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးဂိမ်း၏၊များအတွက်သင့်လျော်သောအသီးများနှင့်အသီးအကစားသမား။ တချို့ကစားသမားတွေအကြိုက်ခံရဖို့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းအချက်နှိပ်ပါနှင့်ဆက်ဇာတ်လမ်းလိုင်းများအတွက်ရုပ်ရှင်နှင့်တူ။ အခြားသူများနှင့်တူကစားရန်အဖြစ်ဇာတ်ကောင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီ၊ပိုကြီးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဖြစ်သူတို့ကစားနှင့်မင်း။, တချို့ကစားသမားတွေအကြိုက်ခံရဖို့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းထပ်ခါတလဲလဲနိုင်မှစတင်ပြီးတဦးတည်းအတွက်ဥပမာပြီးတော့စတင်ခြစ်ရာကနေ။ အများစုကပိုပြီးအမျိုးအစားများၹာဒီမှာရရှိနိုင်ပါပေါ်မူတည်ပြီး၊သင့်ရဲ့အသက်ရှူဖို့။ ဒါကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ည့္ဒီစွန့်စားမှုဂိမ်းများ၊မှတ်၊ကဒ်ဂိမ်းများ၊ရှိကြ၏၊ပုံပြင်မောင်းနှင်ဂိမ်းများနှင့်လည်းပွင့်လင်းကမ္ဘာဂိမ်းများများအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်အလုပ္ရွာေ။ ဒီဘက်ပါ၊သင်ရွေးချယ်ဖို့သူသင်ချင်အဖြစ်၊သင်အောင်ဘုရားအကြားအနည်းငယ်၊အပြစ်နှင့်အကျွန်ုပ်အားအင္ခ်ိ။ အမျိုးအစားများအဆုံးမဲ့များမှာ၊သူတို့ကကိုယ့်လိုအပ်ခံရဖို့တွေ့ရှိပြီးစူးစမ်းနည်းမှန်လမ်းမှန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအားပညာရှင်၊စမ်းသပ်နှင့် retested အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားတွေကိုရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာနှင့်ဂျပန်ညမ်းဂိမ်းများစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့။ အဇိုင္းကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အမည်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့တစ်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကြီးစေပါလိမ့်မယ်သင်မေ့လျော့တော်မတကယ်တန်းအဆိုပါစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောငြိမ်ဝပ်နှင့်အမြှုပ်။ ဒါ့အပြင်၊ေပးခ်င္တယ္ဆို၊စာလုံးများနှင့်အာဘော်များ၊အမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရည်အသွေး၊ဒီဇိုင်းခံရဖို့အလွန်အမင်းအသုံးပြုသူဖော်ရွေမှု၊သွားလာရန်လွယ်ကူသောနှင့်သံုးသူမည်သူမဆိုရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခရီးစဉ်အဆက်။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်၊သင်တန်း၏၊ကာတွန်းစတိုင်၊မလေးကိုလည်းအမြဲနေဖို့သာအဓိက။, ပင်လည်းရှိ၏နောက်ဆက်တွဲေရြးခ်ယ္စရာကစားနည်းအများကြီးရောက်စေဖို့ကစားသမားအတူတကွပူးပေါင်းသို့သူတို့ကိုငါတစ်ဦးစွန့်စားမှုအစဉ်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မည်။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါအမကသောမည်သူမဆိုများအတွက်၊အချို့သောလိင်ဂိမ်းများနှင့်လုပ်ရပ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါကယ့်အမာခံနှင့်အပေါ်သို့လန်ဒီသိတယ်။ ဒါကြောင့်၊သင်ရှာလိုလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဘို့အဆင်သင့်ခရီးသင့်အသက်တာရရှိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အံ့သြမိန်းနှင့် sexed ထွက်ကန်အမှန်ပည္ဆိုင္ရာနှင့်အော်ဂဇင်ဘယ်တော့မှမမီတူ။ အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကနေတြန္းထိန်းမရရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ဂရုပန္လည္သုံးအားဖြင့်!
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ယခုမည်သူမဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဂ်ညမ်းဂိမ်းစုဆောင်းမှုနှင့်ပျော်မွေ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အတူလာ၊အဘို့အလုံးဝအခမဲ့! ဟုတ်ကဲ့၊အဲဒါအမှန်ပါပဲ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအားလုံးအခမဲ့တာဝန်ခံ၏တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း၊ကစားရန်လွယ်ကူသော။ ကစားသမားဘူးပင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သို့မဟုတ်မဝင်မည်သူတို့မကျင့်လျှင်၊ကတူခံစား။ ထို့အပြင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်၊အဓိပ္ပါယ်ကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်အပေါ်ဝင်ရောက်မည်သည့်စက်ကိရိယာပေမည်။ အရေးမပါဘူးဆိုရင်အလုပ်ပါသို့မဟုတ် iOS ပန်ကာ၊သို့မဟုတ်ရှိမရှိသင်ကိုယ်ပိုင်အတော့ခ်ကွန်ပျူတာ၊တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကို၊သင်သည်ငါတို့နှင့်အတူလျော့ပါးနှင့်ကျေးဇူးတော်။, အပြင်၌ရှိလိမ့်မည်၊အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာသို့မဟုတ်အနှောက်အယှက်ပေါ်လာပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးအထံမှသင်တို့ကိုအာရုံသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်။ သင်ရုံရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ရာက္ၾမျိုးအစားများ၊အရာများမှာထက်သာအစဉ်အဆက်ရှာတွေ့၊သင်သည်သင်၏ဂိမ်းနှင့်အသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားကြည့်ပါစိတ်ကူးယဉ်ချင်သင်ချင်ပါ။ ဒါကြောင့်၊အပေါ်နှင့်အတူရပ်တန့်၊အချိန်ဖြုန်းလိမ့်မည်၊လိင်ပြည့်စုံလာချိန်အတွက်။ အားလုံးသည်ဇာတ်ကောင်များမှာတောများ၏ကြက်၊အလုပ်မသူတို့ကိုစောင့်မည်သည့်တော့ဘူး။